Qatar Oo Ka Hadashay Heshiisyada Israa’iil Iyo Dalalka Carabta – somalilandtoday.com
Qatar Oo Ka Hadashay Heshiisyada Israa’iil Iyo Dalalka Carabta
(SLT-Doha)-Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegey in xidhiidhka ay dalal Carbeed la sameeyeen Israa’iil uu majaxaabineyo dadaallada lagu doonayo in Falastiin ay dal ku noqoto, balse waxa uu sheegey in dalalkaasi ay u madax bannaan yihiin inay sidaasi sameeyaan.
Dalalka Imaaraadka Carabta, Baxreyn iyo Sudan ayaa bilihii dhawaa go’aansaday inay cadowtinimadii Israa’iil ka dhaxeysay meel iska dhigaan, oo ay xidhiidh wanaagsanna abuuraan, kadib heshiisyo uu ka soo shaqeeyay maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Hoggaamiyayaasha Falastiin, ayaa ku eedeeyay dalalkaasi qayaano, halka saraakiil Mareykan iyo Israa’iil ah ay sheegeen in dalal kale oo Carbeed ay waddada ku soo jiraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Qatar, Sheekh Maxammed bin Cabdulraxman Al-Thani ayaa yidhi “waxay ila tahay inay wanaagsanaan laheyd in la helo Carab mideysan oo danaha Falastiiniyiinta ka dhigta midka koowaad, soo afjarana heysashada Israa’iil.”
Balse Sheekh Maxammed bin Cabdulraxman Al-Thani ayaa sheegey in dalalka heshiiska la gaadhey Israa’iil ay yihiin kuwa marka ugu dambeysa go’aan ka gaadha waxa u wanaagsan dalalkooda.